किन हुँदैन सन्तान ? सन्तान नभए के गर्ने ? जानकारीको लागी पढौं र सेयर गरौं « Today Khabar
किन हुँदैन सन्तान ? सन्तान नभए के गर्ने ? जानकारीको लागी पढौं र सेयर गरौं
प्रकाशित १ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १६:५३
काठमाडौं,१ जेठ । विवाहपछि प्रत्येक दम्पतिको एउटा स्वाभाविक सपना हुन्छ– घरमा बच्चाको हाँसो गुन्जियोस् । तर चाहँदा–चाहँदै पनि सबैको यो सपना पूरा हुन सकिरहेको हुँदैन । कुनै–कुनै महिलाले सन्तान जन्माउन सक्दैनन् । यस्ता दम्पत्तिमध्ये धेरैले आफ्नो जीवन एक्लो र फिका अनुभव गर्छन् ।
निःसन्तान भनेको कुनै पनि परिवार नियोजनका साधन नअपनाई नियमित सहवासपश्चात् पनि २ वर्षभित्र गर्भधारण हुन नसकेको अवस्थालाई मानिन्छ । सन्तान हुन नसक्नुमा महिला तथा पुरुष दुवै समान रुपमा जिम्मेवार मानिन्छन्। कहिलेकाहीँ दुवैमा खराबी नहुँदानहुँदै पनि गर्भ रहन कैयौं वर्ष लाग्न सक्छ । किनभने गर्भ रहनु भनेको एउटा आकस्मिक घटना हो । स्वस्थ हुँदाहुँदै पनि पुरुषको शुक्रकीटले महिलाको अण्डा भेट्ने अवसर नपाएको हुनसक्छ ।
स्त्री रागरस वा पुरुष रागरसको कमीका कारण यस्तो हुनसक्छ । हाम्रो समाजमा सन्तान नहुनेलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने र हेलाँ गर्ने चलन छ । निःसन्तानका हातको पानी चल्दैन वा पितृहरु विमुख हुन्छन् भन्ने अन्धविश्वासी परम्परा पनि हाम्रो समाजमा छ । यस्तो गर्नु राम्रो होइन । निःसन्तान हुनुको कारण निक्र्याेल गर्नु जरुरी हुन्छ ।
छोटो समयमै सन्तानको इच्छाका कारण तनाव पर्दा सन्तान जन्माउन सकेका हुँदैनन् । श्रीमान–श्रीमती दुवैमा कुनै खरावी नभएपनि तनावका कारण समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
कतिपयले उपचारका क्रममा भन्ने गरेको पाइन्छ, ‘विवाह गरेको ४–५ वर्ष भयो, सन्तान भएको छैन ।’ यस्ता समस्या लिएर आउनेका लागि ओम अस्पतालले शुक्रकीट फ्रिज गरेर उपचार गर्ने गरेको छ । श्रीमानको शुक्रकीट जम्मा गरेर राख्ने र श्रीमान विदेश गैसकेपछि पनि श्रीमतीको पाठेघरमा राखी उपचार गर्ने गरिन्छ ।
तर यस्तो अवस्थालाई हाम्रो समाजले श्रीमान विदेशमा भएको समयमा पनि कसरी गर्भवती भएको भनेर नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने चलन छ । यसमा जनचेतना जगाउन जरूरी छ । श्रीमानको शुक्रकीट नै श्रीमतीको पाठेघरमा राखिएको हुन्छ।
त्यस समयसम्म उनीहरु पुनः रोजगारीका लागि फर्कुपर्ने भैसक्छ । त्यसकारण पनि सन्तान चाहेको समयमा हुनसकेको हुँदैन । उनीहरूका लागि आईयूआई प्रविधिबाट उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विधिद्वारा ओम अस्पतालमा करीब २ हजारले सन्तान जन्माएका छन्।
आईयूआई प्रविधिमा महिनावारी भएको दोश्रो दिनबाट अण्डा बन्ने औषधि दिएर ९ दिनबाट टिभिएसबाट अण्डा बनेको गतिविधि हेरिन्छ । कसैकसैलाई हर्मोनको इन्जेक्सन पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
महिनावारी भएको चौध–पन्ध्र दिनमा जब अण्डा फुट्छ तब श्रीमानको विर्य संकलन गरी आईभिएफ मिडियामा हेरेर मसिनो नलीको माध्यमबाट श्रीमतीको पाठेघरमा राखिन्छ । यो प्रक्रिया पीडादायक हुँदैन । यसमा बिरामीलाई अस्पताल पनि भर्ना हुनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन ।
श्रीमानको विर्य संख्या निकै कम भएको या शुक्राणुको अभाव भएको अवस्थामा श्रीमान–श्रीमती दुवैको सहमतिबमोजिम दाताको शुक्राणु लिएर यो प्रविधि अपनाइन्छ । आईयूआई प्रविधिका लागि पाठेघरको एउटा नली भएपनि खुल्ला भएको हुनुपर्छ र पाठेघरको झिल्लीपनि स्वस्थ हुनुपर्छ ।
यदि महिलाको पाठेघरको दुवै नली बन्द भएमा, नलीहरू शल्यक्रियाद्वारा निकालिएमा, ६ पटकसम्म आईयूआई सफल नभएमा, बाँझोपनको कुनै कारण पत्ता नलागेमा आइभिएफ (टेष्टट्युव बेबी) विधि अपनाइन्छ । स्वास्थ्य खबरबाट